Uxanduva lomqeshi nomqeshwa ngokoMthetho weeMeko zokuSebenza | Law & More BV
Blog » Uxanduva kumqeshi nakumqeshwa ngokoMthetho weeMeko zokuSebenza
Uxanduva kumqeshi nakumqeshwa ngokoMthetho weeMeko zokuSebenza
Nawuphi na umsebenzi owenzayo, umgaqo osisiseko eNetherlands kukuba wonke umntu kufuneka akwazi ukusebenza ngokukhuselekileyo nangokwempilo. Umbono weli nqanaba kukuba umsebenzi akufuneki ukhokelele ekuguleni ngokwasemzimbeni nangokwengqondo kwaye hayi konke konke ekufeni ngenxa yoko. Lo mthetho-siseko uqinisekisiwe ngokwenziwa nguMthetho weeMeko zokuSebenza. Lo mthetho ke ujolise ekukhuthazeni iimeko ezifanelekileyo zokusebenza kunye nokuthintela ukugula nokungakwazi ukusebenza kwabasebenzi. Ngaba ungumqeshi? Kwimeko apho, ukhathalelo lwendawo yokusebenza esempilweni nekhuselekileyo ngokuhambelana noMthetho weeMeko zokuSebenza uxhomekeke kuwe. Ngaphakathi kwenkampani yakho, akufuneki kuphela ukuba kubekho ulwazi olwaneleyo lokusebenza okunempilo nokukhuselekileyo, kodwa izikhokelo zoMthetho weeMeko zokuSebenza kufuneka zilandelwe ukuthintela ingozi engeyomfuneko kubasebenzi. Ngaba ungumqeshwa? Kwimeko apho, izinto ezimbalwa zikwalindelwe kuwe kwimeko yendawo esempilweni nekhuselekileyo yokusebenza.
NgokoMthetho weeMeko zokuSebenza, umqeshi unoxanduva lokujongana neemeko zokusebenza kunye nomqeshwa. Njengomqeshwa, kufuneka ke ngoko ube negalelo ekudaleni indawo enempilo nekhuselekileyo yokusebenzela. Ngokukodwa, njengomqeshwa, ngokwemiqathango yoMthetho weeMeko zokuSebenza, unyanzelekile:
ukusebenzisa izixhobo zokusebenza nezinto eziyingozi ngokuchanekileyo;
ukungatshintshi kunye / okanye ukususa izikhuselo kwizixhobo zomsebenzi;
ukusebenzisa izixhobo / izixhobo ezikhuselekileyo ezenziwe ngumqeshi ngokuchanekileyo nokuzigcina kwindawo efanelekileyo;
basebenzisane kulwazi oluququzelelweyo kunye nomyalelo;
ukwazisa umqeshi ngomngcipheko oqwalaselweyo kwimpilo nokhuseleko kwinkampani;
ukunceda umqeshi nabanye abantu abaziingcali (njengegosa lothintelo), ukuba kukho imfuneko, ekwenzeni uxanduva lwabo.
Ngamafutshane, kufuneka uziphathe ngokufanelekileyo njengomsebenzi. Ukwenza oku ngokusebenzisa iimeko zokusebenza ngendlela ekhuselekileyo kwaye wenza umsebenzi wakho ngendlela ekhuselekileyo ukuze ungazibeki engozini wena kunye nabanye.
Ukuze ube nakho ukubonelela ngendawo yokusebenza esempilweni nekhuselekileyo, wena njengomqeshi kufuneka ulandele umgaqo-nkqubo ojolise kwezona meko zokusebenza zingcono. UMthetho weeMeko zokuSebenza unika isikhokelo kulo mgaqo-nkqubo kunye neemeko zokusebenza ezihambelana nawo. Umzekelo, umgaqo-nkqubo weemeko zokusebenza kufuneka kwimeko nganye uqulathe Uluhlu lweengozi kunye novavanyo (RI&E). Njengomqeshi, kufuneka uchaze ngokubhala ukuba yeyiphi na ingozi yokubandakanya umsebenzi kubasebenzi bakho, ukuba ingaba le mingcipheko kwezempilo nokhuseleko ijongiswana njani kwinkampani yakho kwaye yeyiphi na imingcipheko yendlela yokusebenza esele yenzekile. A igosa lothintelo ikunceda ekuyileni uluhlu lweengozi kunye novavanyo kwaye inike iingcebiso malunga nomgaqo-nkqubo wezempilo nokhuseleko. Yonke inkampani kufuneka ichonge ubuncinci igosa elinjalo lothintelo. Lo akufuneki abe ngumntu ovela ngaphandle kwenkampani. Ngaba uqesha abasebenzi abangama-25 okanye abambalwa? Emva koko unokusebenza njengegosa lokuthintela ngokwakho.
Omnye umngcipheko enokujongana nayo nayiphi na inkampani eqeshe abasebenzi kukungabikho emsebenzini. NgokoMthetho weeMeko zokuSebenza, wena njengomqeshi kufuneka ubene umgaqo-nkqubo wokungabikho kokugula. Ngaba wena njengomqeshi ujongana njani nokungabikho emsebenzini xa kusenzeka kwinkampani yakho? Impendulo yalo mbuzo kufuneka uyibhale ngendlela ecacileyo nefanelekileyo. Nangona kunjalo, ukunciphisa amathuba okuba ubungozi bufezekiswe, kuyacetyiswa ukuba ube ne Uviwo lwempilo lwangexesha (PAGO) yenziwa ngaphakathi kwenkampani yakho. Ngexesha loviwo olunjalo, ugqirha wenkampani wenza uluhlu lwezinto zokuba ingaba uneengxaki zempilo ngenxa yomsebenzi. Ukuthatha inxaxheba kolu phando akunyanzelekanga kumqeshwa wakho, kodwa kunokuba luncedo kakhulu kwaye kube negalelo kwisangqa esisempilweni nesibalulekileyo sabasebenzi.
Ukongeza, ukuthintela eminye imingcipheko engalindelekanga, kufuneka utyumbe Iqela lempendulo engxamisekileyo ngaphakathi endlwini (BHV). Igosa lokuphendula ngexesha likaxakeka kwinkampani liqeqeshelwe ukuzisa abasebenzi kunye nabathengi kukhuseleko kwimeko engxamisekileyo kwaye ke liza kuba negalelo kukhuseleko lwenkampani yakho. Unokuzimisela ngokwakho kwaye bangaphi abantu obatyumba njengegosa lokuphendula ngokukhawuleza. Oku kuyasebenza nakwindlela eya kuthi iphendule ngayo imeko kaxakeka yenkampani. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uthathe ubungakanani benkampani yakho uyithathele ingqalelo.
Ukubeka iliso nokuthobela
Ngaphandle kwemithetho nemigaqo esebenzayo, iingozi zomsebenzi zisenzeka minyaka le eNetherlands ebezinokuthintelwa ngokulula ngumqeshi okanye ngumqeshwa. Ubukho nje boMthetho weeMeko zokuSebenza awusoloko ubonakala ngathi wanele ukuqinisekisa umgaqo wokuba wonke umntu kufuneka akwazi ukusebenza ngokukhuselekileyo nangempilo. Kungenxa yoko le nto i-Inspectorate SZW ijonga ukuba ngaba abaqeshi, kodwa nokuba ingaba abasebenzi bayayithobela na imithetho yemisebenzi esempilweni, ekhuselekileyo nenobulungisa. NgokomThetho weeMeko eziSebenzayo, abaHloli bangaqala uphando xa kwenzeke ingozi okanye xa ibhunga elisebenzayo okanye umbutho wabasebenzi uyicela. Ukongeza, uMhloli unamandla amakhulu kunye nentsebenziswano kolu phando kunyanzelekile. Ukuba abahloli bafumanisa ukwaphulwa koMthetho weeMeko zokuSebenza, ukumiswa komsebenzi kungakhokelela kwisohlwayo esikhulu okanye ulwaphulo-mthetho / ulwaphulo mthetho. Ukuthintela amanyathelo afikelela kude, kuyacetyiswa kuwe njengomqeshi, kodwa nanjengomqeshwa, ukuthobela zonke izibophelelo zoMthetho weeMeko zokuSebenza.
Ngaba unayo nayiphi na imibuzo malunga nale bhlog? Emva koko qhagamshelana Law & More. Amagqwetha ethu ziingcali kwicandelo lomthetho wezengqesho kwaye ayakuvuyela ukukunika iingcebiso.
Post edlulileyo Intlawulo enyanzelekileyo: Ukuvuma okanye ukungavumelani?
Post Next Ukurhoxa